Issa Hayatou oo helay keli - CIYAARO.COM
Home / World / Issa Hayatou oo helay keli	Issa Hayatou oo helay keli
ZURICH (CIYAARO) — Madaxweynaha kumeel gaarka ah ee FIFA Issa Hayatou ayaa lagu guuleystay qaliin lagu sameeyay si loogu talaalo ama loogu galiyo kilyo cusub, sida lagu sheegay war ay si wada jir ah u soo saareen FIFA iyo CAF.
Hayatou, oo 69 sano jir ah isla markaana Cameroon u dhashay ayaa khamistii lagu sameeyay qaliin, wallow aan la sheegin meesha sida gaarka ah qaliinka loogu sameeyay. Hayatou inta badan waqtigiisa wuxuu ku qaataa Paris.
Shaqadiisa ugu horeysa ee FIFA waxey ku beegantahay Dec. 2-3 markaasoo uu shir gudoomin doono guddiga fulinta ee FIFA, kaasoo ka dhici doona Zurich.
Hayatou ayaa noqday madaxweynaha kumeel gaarka ah ee FIFA markii howlaha FIFA laga fariisiyay Sepp Blatter 8dii Oct, markii lagu soo oogay dacwo la xiriirk dhanka dhaqaalaha.
Related posts:United oo kuftay iyo city oo soo noolaatayEriksson oo looga adkaaday xilka Ukraine 6 sano kadib Spurs oo final NBA timid––daawoShare/Bookmark	FIFAHayatounew